Vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe Vomiswa Pamberi Pedare repaUZ
Vatungamiri vasere veStudents Representative Council, vamiswa neChitatu pamberi pedare kana kuti disciplinary-hearing commitee ranga richitungamirwa na Vice-Chancellor veUniversity of Zimbabwe, Va Levy Nyangura, zvichitevera kuratidzira kwavakaita panguva iyo vadzidzi vakadzingwa mudzimba dzavaigara muna Chikunguru.
Bazi rinoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano re SRC, rinoti dare iri, ratadza kuwana umbowo hwakakwana naizvozvo harina kukwanisa kupedzisa dare iri zvakanaka. Zvinonzi vadzidzi vatatu vanoti Thabani Moyo, Manifest Jabuli, Tatenda Chiuya, ndivo vane nyaya dzanzwika nedare asi, Tatenda chete ndiye aonekwa asina mhosva. Ukuwo mhosva yanga ichipomerwa Manifest naThabani yaraswa sezvo vanga vasina humbowo hwakakwana.
Vamwe vatungamiri vevadzidzi , Lovemore Chinoputsa, mutungamiri weSRC, Sean Matsheza, mutevedzeri wemutungamiri we SRC, Fortune Chamba, munyori wezvemitemo, Ceasar Sitiya na Shadreck Vengesai vanzi vachagadzwa zvakare dare musi wa 7 muna Mbudzi.
Vadzidzi ava vanga vakamirirwa naVa Halimani naVa Shekede magweta eku Wintertons Legal Practitioners
Mutori wenhau weStudio 7, Carole Gombakomba aita hurukuro nemunyori musangano revadzidzi re Zimbabwe National Students Union-ZINASU, Beloved Chiweshe, kuti tinzwisise nezve mhosva dziri kupomerwa vadzidzi ava.